China Wall Mirror ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-ebu ya | Donghua
A na-ekepụta akwụkwọ mmado DHUA Acryli Mirror Wall n'ụzọ zuru oke maka mmemme Gị. A na-eji plastik acrylic eme ka enyo enyo a dị na enyo, elu ya na-egosipụta ma azụ nwere gluu onwe ya, ọ nwere ike ịdị mfe mado ma wepụ ya na-enweghị mmerụ ahụ na mgbidi gị, enweghị ngwaọrụ ọzọ achọrọ. Ihe ndozi mgbidi acrylic bụ nke na-adịghị egbu egbu, nke na-abụghị friable, nchekwa gburugburu ebe obibi na mgbochi corrosion.
• Dị na ọtụtụ nha ma ọ bụ nha omenala
• Dị na ọlaọcha, ọla edo ect. ọtụtụ agba dị iche iche ma ọ bụ omenala
• Dị na hexagon, gburugburu, obi ect. dị iche iche ma ọ bụ omenala ụdị
• ọnọ a echebe film n'elu, onwe-nrapado azụ
Mirror Wall ihennyapade, mbughari Acryli Mirror Akwụkwọ mmado DIY Wall Ihe ndozi Mirror Non Glass Mirror maka Ulo Ime Bedlọ Ime Declọ
Ọdịdị enyo mara mma nke ụlọ gị ma ọ bụ ọfịs ga-eme ka ime ụlọ gị nwee ume ọhụrụ, mepụta ọnọdụ dị mma ma nye mmetụ dị ịtụnanya n'ime gị.
Dhua enyo mgbidia na - eji plastik acrylic eme ihe eji eme ihe, elu ya na - eche echiche ma azu nwere ya n'onwe ya; Enwere ihe nkiri nchedo n'elu enyo ahụ iji gbochie ịchacha enyo ahụ, enweghị ngwaọrụ ọzọ achọrọ na ịtọ.
Ihe ndozi acrylic a abụghị ihe na-egbu egbu, nke na-abụghị friable, nchekwa gburugburu ebe obibi na mgbochi mmebi ahụ. O doro anya ma gosipụta ya dị ka enyo klaasị, mana ọ naghị adị nkọ ma na-emebi emebi na-enweghị mmebi ọ bụla.
Ihe: Plastic, acrylic
Agba: ọlaọcha, ọla edo ma ọ bụ karịa na enyo
Size: Otutu nha ma obu omenala
Eke: Hegagon, gburugburu, obi ect. dị iche iche ma ọ bụ omenala ụdị
Style: Oge a
Ngwa: Ezigbo na ọcha na-ebupụta tinyere iko, seramiiki tile, plastic, metal, osisi na latex agba
Mkpa ka agbapụ nchebe film, ga-egosipụta a doro anya mirror mmetụta
Mkpa ka ị rapara na ezigbo ala
【Ihe kacha mma】: Ndị a enyo mgbidistikal decal ka nke acrylic, fechaa na inogide. Elu na-eche echiche na azụ nwere gluu onwe ya; Elu nwere ihe nkiri nchebe na ya, iji nwee mmetụta ka mma na enyo doro anya. Tupu ịgafe biko hichaa mgbidi ahụ, biko were ya pụọ ​​wee rapara ngwaahịa ahụ n'elu elu mgbe ị na-eji ya.
【Nha, Agba & Ọdịdị】: Acryli mirror nwere ike mepụtara mfe n'ime ihe ọ bụla chọrọ udi, -abịa na ọtụtụ dị iche iche na agba na nha
Ọrụ】: Igwe ihe eji achọ mma na-eme ka ụlọ gị dị iche, na-adọrọ adọrọ; Maka ikuku na-atụgharị uche nwere ike ime ka ime ụlọ gị cha cha. Mee N'onwe Gị ihe wetara gi obi uto, iso umuaka gi na aru oru, nyere nwa gi aka inweta amamihe ..
Mbughari na mgbochi-ọkọ】: enyo mgbidis ihe mmado achọ mma nwere ike ịdị mfe mado wee wepu ya n’enweghị nsogbu na mgbidi gị. enwere ihe nchedo n’elu enyo iji gbochie ịkpụcha enyo ahụ, biko bepụ ya n’oge eji ya, enyo ahụ ga-apụta. Biko rịba ama na enyo nwere ihe nkiri na-eche nche
Mfe iji Wụnye】: mgbidi akwụkwọ mmadoenwere ike idozi ya nfe site na nloghachi ya ma wepu ya n’emebighi mgbidi gi. Ọ dịghị ọzọ ngwaọrụ chọrọ na mwube. Naanị wepụ ihe nkiri azụ wee rapara na ebe dị mma ị họọrọ, dị ka taịl nile, mgbidi, ọnụ ụzọ, windo, na ime ụlọ. Mgbe ahụ pụọ n'ihu nchedo ihe nkiri.
Nchekwa na Waterproof】: Mee N'onwe Gị mgbidi mirrior ka ejiri acrylic mee, ma ihe a abụghị nke na-egbu egbu, nchebe gburugburu ebe obibi, enweghị nchekwa, mgbochi mmebi. Akwụkwọ mmado doro anya doro anya ma na-egosipụta dị ka enyo klaasị, mana ọ bụghị nkọ ma na-emebi emebi na-enweghị mmebi ọ bụla. Nwee anụrị ma nwee obi iru ala ebe ị na-emezi enyo gị na ụmụ aka gị na ụmụ aka gị na-echegbughị onwe gị gbasara mmerụ ahụ ọ bụla. Ọ dị nchebe karịa enyo ochie ahụ!
【Ngwa Ngwa: Nke a acrylic nrapado mirror mpempe akwụkwọ setịpụrụ n'ụzọ zuru oke maka ọrụ Gị. Enwere ike itinye akwụkwọ mmado enyo na ebe ọ bụla dị mma ma dịkwa ọcha dị ka mgbidi, ọnụ ụzọ, windo, kọlọtọ, na ihe ndị ọzọ, maka ime ụlọ, ebe a na-egwu ụmụaka, ebe a na-eri nri, ebe a na-esi nri, ebe a na-eme egwuregwu, ụlọ ọrụ ụlọ, paseeji, mgbidi dị na TV, sofa ndabere mgbidi, ime ndabere mgbidi owuwu ụzọ mbata na ndị ọzọ na-achọpụta ihe ọhụrụ mgbidi mma ngwaahịa, wụnye ya na-eme ka ohere ọzọ doro anya na chawapụrụ.
Ntụpụ ụkwụ 1: Biko hichaa elu ebe ị chọrọ itinye akwụkwọ mmado.
MARA: Ọ bụrụ na mgbidi ahụ edoghị anya, ndị staka ahụ ga-ada n'ime awa 24.
Ntụpụ ụkwụ 2: Wepu azụ akwụkwọ nchedo, mgbe ahụ, tinye ha na mgbidi ma ọ bụ ndị ọzọ n'elu.
Ntụpụ ụkwụ 3: E nwere ihe nkiri nchedo dị n’ihu. Bee ihe nkiri nchedo site na mpempe akwụkwọ ma jiri nwayọọ hichaa elu ahụ.
Nke a abụghị mirror, ọ gaghị enwe ike iji ya dị ka enyo dochie anya ya n'ihi na ndị a bụ naanị mmetụta. Enwere ihe nkiri nchedo nke ejiri chebe elu. Biko kpoo ya tupu i jiri ya.
Q1: Bụ Donghua kpọmkwem OEM emeputa?
A: Ee! Donghua bụ OEM emeputa maka plastic mirrror Ibé akwụkwọ mmepụta kemgbe 2000.
Q2: Kedu ozi m ga-enye maka ọnụahịa?
A: Iji na-enye kpọmkwem ego, anyị na-atụ anya na ndị ahịa nwere ike ịgwa anyị ihe, nkọwapụta dị ka ọkpụrụkpụ, size, na nrapado ma ọ bụ, otú ọtụtụ na agba maka Mbipụta, kọntaktị nkọwa, nke ukwu chọrọ, Size na Shape na artwork faịlụ.
Q3. Gịnị bụ gị usoro nke ịkwụ ụgwọ?
A: T / T, Alibaba Trade nkwa wdg 30% nkwụnye ego, 70% tupu Mbupu. A ga-eziga foto ma ọ bụ vidiyo nke imepụta oke tupu ebufee.
Q4: Gini bu usoro inye gi?
Q5: Kedu maka oge nnyefe gị?
A: Ọtụtụ mgbe 5-15 ụbọchị. Dị ka ibu gị si dị.
Q6. Kedụ ka m ga - esi nweta ụfọdụ nnwale? Gịnị bụ ụkpụrụ nlele gị?
A: Anyị nwere obi ụtọ ịnye gị ụfọdụ ọnụọgụ n'efu mgbe niile na ebubo mbufe.
acryli mirror ihennyapade
enyo mgbidi enyo
enyo akwụkwọ mmado mgbidi
mirror akwụkwọ mmado
gosipụtara omume na mgbidi
mgbidi mirror ji achọ
mgbidi akwụkwọ mmado
mgbidi enyo ụlọ ihe ndozi